पारिवारिक हिंसा एक साझेदारको धम्कीको पुनरावर्ती चक्र अर्को नजिकको सम्बन्धमा अर्को मा। यो अनदेखी गर्न सकिन्छ र केहि समयको लागि खराब मूड वा साझेदारको खराब चरित्रलाई संदर्भित गर्न सकिन्छ, तर यदि यो अविवाहित अभावको साथ दोहोरिन्छ - यो अलार्म आवाजको समय हो।
पारिवारिक हिंसाको अवधारणाको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यो हो कि यो विभिन्न प्रकारका विद्रोहीहरूको विभिन्न घटना हो। हिंसा, पारिवारिक संघर्षको विपरीत, प्रणालीगत हो। द्वन्द्वको हृदयमा एक विशेष समस्या समाधान हुन समस्या छ, र आक्रमणहरूले घायल पार्टीमा पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्न ठाउँ पाउँदछ। यद्यपि अपमानकर्ताले आफ्नो कार्यका लागि धेरै र कम पर्याप्त कारणहरू बोलाउन सक्दछ, वास्तविकतामा उनी परिवारका सदस्यहरु मध्ये एक भन्दा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्न चाहन्छन्। पारिवारिक हिंसाको विच्छेदले बताउँछ कि महिला र बालबालिका प्रायः पारिवारिक हिंसाको पीडित हुन्। यो यो श्रेणी हो जुन प्रायः ह्रास र निराशा हटाउने शक्ति र चरित्र छैन। दुर्भाग्यवश, प्राय: यस्तो व्यक्ति त्यस्ता देशी पति र बुबा हुन्।
पारिवारिक हिंसाका प्रकारहरू विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ:
आर्थिक हिंसा। धेरै वित्तीय मुद्दाहरूको स्वतन्त्र समाधान, बच्चाहरूलाई समर्थन गर्न इन्कार गर्ने, आय को लुकाउने, पैसाको स्वतन्त्र बर्बाद।
यौन हिंसा। पारिवारिक विफलताको समयमा पतिहरूले आफ्नी पत्नी वा बच्चाहरूको विरुद्धमा यौन र हिंसामा रिस उठाउँछन्। हिंसाको यो प्रकारमा पनि समावेश छ: यौन दबाब, तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा अपरिचित यौन सम्बन्ध, अजनबारीहरू, बालबालिकाहरू, र यौन सम्बन्धको सम्बन्धमा तीव्र सम्बन्धमा दिक्क लाग्ने।
शारीरिक हिंसा (धकेल्दा, अजीब, फेंकने, स्पिटिङ, धक्का, धारण गर्दै, मेडिकल वा सोशल सहायतामा पहुँच नियन्त्रण)।
मनोवैज्ञानिक हिंसा (अपमान, बच्चाहरु विरुद्ध वा हिंसा विरुद्ध नियन्त्रणको खतरा स्थापित गर्न, आफैंका विरुद्ध हिंसा, घरेलु जनावरहरू, सम्पत्तिको क्षति, ब्ल्याकमेल, अपमानजनक कार्यका लागि सहज)।
वयस्क शिकार नियन्त्रण गर्न बालबालिकाहरूको प्रयोग (छनौट गरिएको शिकारमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसाका लागि बालबालिकाको सट्टा, बच्चाहरु संग हेरफेर)।
पारिवारिक हिंसाको शिकारहरूले त्यस्तो स्थितिलाई सहन सक्दैन। भले पनि आत्म-सम्मानले तपाईंलाई राम्रो जीवनको लागि चाहन अनुमति दिदैन, तपाईले सधैँ मित्र र आफन्तहरु बाट मद्दत खोज्नुपर्छ। र केहि अवस्थामा, केवल सरकारी एजेन्सीहरुले अपराधीको हातमा पतन गर्नेहरूलाई मद्दत गर्न सक्छन्।
महिलाको लागि तलाक कसरी बचाउनुहुन्छ?
म आफ्नो पूर्व पति कसरी घरबाट निकाल्न सक्छु?
विवाह चिन्ह र अन्धविश्वास
केटालाई धोखा दिने कसरी बुझ्न सकिन्छ?
भविष्यको पतिको नाम कसरी जान्नुहुन्छ?
एक मनोवैज्ञानिक को एक प्यार को कसरि एक प्यार को भूल जाओ
पन्ना रंगमा विवाह
पतिको लागि कसरी वांछनीय हुन सकिन्छ?
मारियाह केरी र जेम्स प्याकरको विवाहको विवरण
Trieste - आकर्षण
स्वच्छ लिपस्टिक - उत्तम साधन र घर पर्चीको दर्जा
उल्टो बाहिर निस्कन्छ
सबैभन्दा लाभदायक व्यवसाय
गर्भवती हिलियाया बाल्विनले एक साझा स्नैपशट साझा गर्यो
तपाईंसँग हप्तासम्म कति हप्ता छन्?
दक्षिण कोरियामा भिसा
खैरो कोट - के लुगा लगाउने र फैशनेबल छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
पानीमा ओठ दलहरू
स्लोभेनियाको स्वास्थ्य रिसोर्ट्स
दाँतले तेलको साथ हल्लायो
मेरो यौन कहां छ?
छोटो पेस्ट्रीबाट केक
गर्भावस्थाको 36 हप्ता - के हुन्छ?
वाइड मोती कंगन